Filter ↓ • Sort ↓ • All (2,942) • Untranslated (1,123) • Waiting (1) • Fuzzy (32) • Warnings (0)
<strong>Important:</strong> Before updating, please <a href="https://codex.wordpress.org/WordPress_Backups">back up your database and files</a>. For help with updates, visit the <a href="https://codex.wordpress.org/Updating_WordPress">Updating WordPress</a> Codex page. <strong>အ‌ရေးကြီး ကိစ္စ - </strong> အဆင့်မြှင့်တင်မှု မလုပ်ခင်၊ <a href="https://codex.wordpress.org/WordPress_Backups">သင့် ဒေတာဗေ့စ်နှင့် ဖိုင်များကို အရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။</a> အဆင့်မြှင်တင်မှု အကူအညီအတွက် <a href="https://codex.wordpress.org/Updating_WordPress">WordPress အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း</a> Codex စာမျက်နှာသို့ လည်ပတ် ဖတ်ရှုပါ။	 Details
<strong>အ‌ရေးကြီး ကိစ္စ - </strong> အဆင့်မြှင့်တင်မှု မလုပ်ခင်၊ <a href="https://codex.wordpress.org/WordPress_Backups">သင့် ဒေတာဗေ့စ်နှင့် ဖိုင်များကို အရန်သိမ်းဆည်းထားပါ။</a> အဆင့်မြှင်တင်မှု အကူအညီအတွက် <a href="https://codex.wordpress.org/Updating_WordPress">WordPress အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း</a> Codex စာမျက်နှာသို့ လည်ပတ် ဖတ်ရှုပါ။
2015-04-12 21:14:32 GMT
You can insert media files by clicking the button above the post editor and following the directions. You can align or edit images using the inline formatting toolbar available in Visual mode. စာသား တည်းဖြတ်စနစ်၏ အပေါ်ဘက်ရှိ သင်္ကေတအား ကလစ်နှိပ်ပြီး လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မီဒီယာဖိုင်များအား ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ မျက်မြင် အနေအထားတွင် အသုံးပြုနိုင်သော အတွင်းပိုင်း ပုံစံပြောင်း ကိရိယာဘားတန်းအား သုံး၍ ရုပ်ပုံများအား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် စီစဉ်ချိန်ညှိခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။	 Details
စာသား တည်းဖြတ်စနစ်၏ အပေါ်ဘက်ရှိ သင်္ကေတအား ကလစ်နှိပ်ပြီး လမ်းညွှန်ချက်များအား လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မီဒီယာဖိုင်များအား ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ မျက်မြင် အနေအထားတွင် အသုံးပြုနိုင်သော အတွင်းပိုင်း ပုံစံပြောင်း ကိရိယာဘားတန်းအား သုံး၍ ရုပ်ပုံများအား ပြုပြင်ခြင်းနှင့် စီစဉ်ချိန်ညှိခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
2014-12-18 18:27:27 GMT
The %1$s constant in your %2$s file is no longer needed. %s constant အား သင့် %s ဖိုင်တွင် လံုးဝ မလိုအပ်တော့ပါ။	 Details
%s constant အား သင့် %s ဖိုင်တွင် လံုးဝ မလိုအပ်တော့ပါ။
2014-09-04 20:11:02 GMT
<strong>Quick Draft</strong> &mdash; Allows you to createanew post and save it asadraft. Also displays links to the3most recent draft posts you've started. <strong>အမြန်မူကြမ်း</strong> - စာမူအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီး မူကြမ်းအဖြစ် သိမ်းဆည်ရန် ခွင့်ပြုပေးသည်။ နောက်ဆုံး ရေးသားထားသော မူကြမ်း စာမူ ၅ ခု၏ လိပ်စာအားလည်း ဖော်ပြထားပေးသည်။	 Details
<strong>အမြန်မူကြမ်း</strong> - စာမူအသစ်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီး မူကြမ်းအဖြစ် သိမ်းဆည်ရန် ခွင့်ပြုပေးသည်။ နောက်ဆုံး ရေးသားထားသော မူကြမ်း စာမူ ၅ ခု၏ လိပ်စာအားလည်း ဖော်ပြထားပေးသည်။
Menu structure မီနူး ပုံစံ	 Details
2014-09-04 20:11:07 GMT
After you&#8217;ve done that, click &#8220;Run the installation.&#8221; ၎င်းကို သင်လုပ်ပြီးလျှင် &#8220;ထည့်သွင်းပါ&#8221;ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။	 Details
၎င်းကို သင်လုပ်ပြီးလျှင် &#8220;ထည့်သွင်းပါ&#8221;ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
Disabled ပိတ်ပါ	 Details
2012-02-03 21:01:46 GMT
<span class="count">(%s)</span> ခု ဖွင့်ထားသည်
%s: plugin count
<a href="%1$s">Learn more about WordPress %2$s</a>. <a href="%s">WordPress %s အကြောင်းဆက်လက် လေ့လာပါ</a>။	 Details
<a href="%s">WordPress %s အကြောင်းဆက်လက် လေ့လာပါ</a>။
2014-09-04 20:11:15 GMT
Mine <span class="count">(%s)</span> comments
အားလုံး <span class="count">(%s)</span>
%s: current user's comments count
%s &#8212; WordPress %1$s &#8212; WordPress	 Details
https://wordpress.org/news/feed/ http://wordpress.org/news/feed/	 Details
2011-03-18 09:03:52 GMT
You can use the plugin editor to make changes to any of your plugins&#8217; individual PHP files. Be aware that if you make changes, plugins updates will overwrite your customizations. ပလပ်အင်၏ PHP ဖိုင်တစ်ခုခြင်းကို ပြုပြင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အယ်ဒီတာကို သုံးနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲမှုများ သင်လုပ်ထားလျှင် ပလပ်အင်များကို အဆင့်မြှင့်ခြင်းသည် သင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မှုများကို ထပ်ပေါင်း ရေးသားခံရမည်ကို သတိထားပါ။	 Details
You can use the plugin editor to make changes to any of your plugins&#8217; individual PHP files. Be aware that if you make changes, plugins updates will overwrite your customizations. You can use the plugin editor to make changes to any of your plugins&#8217; individual PHP files. Be aware that if you make changes, plugins updates will overwrite your customizations.
ပလပ်အင်၏ PHP ဖိုင်တစ်ခုခြင်းကို ပြုပြင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အယ်ဒီတာကို သုံးနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲမှုများ သင်လုပ်ထားလျှင် ပလပ်အင်များကို အဆင့်မြှင့်ခြင်းသည် သင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မှုများကို ထပ်ပေါင်း ရေးသားခံရမည်ကို သတိထားပါ။
You can use the theme editor to edit the individual CSS and PHP files which make up your theme. သင့်အခင်းအကျင်းကို ပြုလုပ်ထားသော CSS နှင့် PHP ဖိုင် တစ်ခုချင်းကို အခင်းအကျင်း အယ်ဒီတာကို သုံး၍ ပြုပြင်နိုင်သည်။	 Details
သင့်အခင်းအကျင်းကို ပြုလုပ်ထားသော CSS နှင့် PHP ဖိုင် တစ်ခုချင်းကို အခင်းအကျင်း အယ်ဒီတာကို သုံး၍ ပြုပြင်နိုင်သည်။
<strong>Advice:</strong> Think very carefully about your site crashing if you are live-editing the theme currently in use. <strong>အကြံပြုချက်:</strong> လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အခင်းအကျင်းကို တိုက်ရိုက် ပြုပြင်မှုပြုလုပ်လျှင် သင့်ဆိုဒ်ကို ပျက်ဆီးစေနိုင်သည်ကို သေချာ ဂရုစိုက် စဉ်းစားပါ။	 Details
<strong>အကြံပြုချက်:</strong> လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အခင်းအကျင်းကို တိုက်ရိုက် ပြုပြင်မှုပြုလုပ်လျှင် သင့်ဆိုဒ်ကို ပျက်ဆီးစေနိုင်သည်ကို သေချာ ဂရုစိုက် စဉ်းစားပါ။